‘रवि‘ काे नाममा यतिसम्मकाे व्यापार::Nepal Online News Portal
‘रवि‘ काे नाममा यतिसम्मकाे व्यापार
काठमाडाैंः पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको परिवार शोकमा छ । शालिकरामलाई आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गरेको आरोपमा टेलिभिजन प्रस्ताेता रवि लामिछानेसहित उनका सहकर्मी युवराज कँडेल र नर्स अस्मिता कार्की चितवनस्थित प्रहरी हिरासतमा छन् । यो प्रकरणमा अहिले प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
पक्राउ परेका आरोपितसहित उनीहरुका परिवार र आफन्त पनि चिन्तामा छन् ।
कसैले न्याय पाउँदा कुनै निर्दोषले सजाय पाउने हो कि भन्ने चिन्ता चौतर्फी छ ।
तर, यो प्रकरण कतिपयका लागि ‘महोत्सव’ जस्तै बनेको छ ।
कतिले गीत निकाले, कतिले सस्तो र अपत्यारिलो हेडलाइन अनि कतिले टिसर्ट नै छपाएर बेचिरहेका छन् ।
रवि लामिछाने चर्चित कार्यक्रम प्रस्तोता हुन् । उनी पक्राउपछि उनको अवस्थाबारे थाहा पाउने जिज्ञासा धेरैमा हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले मान्छेहरु रविबारे खोजीखोजी अनलाइन सामाग्री पढिरहेका हुन्छन्, भिडियो हेरिरहेका हुन्छन् । तर, फेसबुक, युट्युब र कतिपय अनलाइनले भने भ्युअर र भिजिटरलाई भ्रामक र अतियुक्तिपूर्ण दृश्य देखाइरहेका छन् ।
यही ‘मौका’ छोपेर कतिपय भ्लगर युट्युब ‘मनिटाइज’ गराउन सफल भएका छन् भने मनिटाइज भएका युट्युबले डलर तानिरहेका छन् । तर, यो चक्करमा तीमध्ये कतिपयले प्रशारण गरेका भिडियोले सामाजिक सद्भाव र संवेदनशीलतामा खलल पुर्याउने काम गरिरहेको छ ।
एकजना भाइले केही दिनअघि एउटा युट्युब च्यानल सुरु गरेका थिए । चितवन पुगेर आइतबार काठमाडौं फर्किएका उनलाई मैले सोधें, ‘भाइ युट्युब कस्तो चलिरहेको छ ?’ उनको सोझो उत्तर थियो, ‘दाई रवि लामिछाने प्रकरणले युट्युबलाई निकै फाइदा भएको छ, सुरुमा तीन सय सस्क्राइबर थिए, करिब एक हप्तामा तीन हजार पुगेका छन् । युट्युब मनिटाइज भइसक्यो ।’ उनले अगाडि अलि रिस उठ्ने र निर्दयी वाक्य प्रयोग गरे, ‘रवि लामिछाने अझै एक महिनाजति छुटेन भने ५० हजार सस्क्राइबर पक्का हो दाई ।’
अहो ! मन दुख्यो । म आश्चर्यचकित भएँ ।
युट्युबरमा डलर तान्ने होड
ती भाइमात्रै होइन, उनीभन्दा धेरै पहिलादेखि युट्युव चलाइरहेका धेरैलाई अहिले शालिकरामको ‘आत्महत्या’ एउटा ‘महाेत्सव’जस्तो भएको छ ।
त्यसैले अहिले युट्युब हेर्ने हो भने सबैका ट्यागमा रवि लामिछाने वा शालिकराम पुडासैनी हुन्छन् । हेडलाइन पनि यस्ता भेटिन्छन्, ‘रवि लामिछाने जेलभित्र यस्तो अवस्थामा’ ‘हिरासतबाट रविले मुख खोले’ ‘प्रहरीले फेला पार्यो यस्तो सनसनीपूर्ण प्रमाण, अब के हुन्छ ?’ ‘पुडासैनी प्रकरण यसरी भएको हो, रविलाई यसकारण फसाइयो’ ‘हुने भो शालिकरामको भिडियोभित्रको रहस्य, हुने भो सबै खुलासा’ ।
हेड्लाइन हेर्दा लाग्छ, युट्युबर नै प्रहरी, वकील अनि न्यायाधीश । कुनै प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्नै नहुने, अनुसन्धानका क्रममा प्रकरणमा जोडिएकालाई पक्रन नहुने, यस्तो त कतै पनि हुँदैन । व्यापारकै लागि यस्तो हुनुपर्थ्यो, यस्तो भएन भन्दै हेडलाइन राखेर विषय र प्रकरणलाई तोडमोड गरी न्याय प्रक्रियालाई प्रभावित गर्नेसम्मका काम भइरहेको छ ।
यस्ता शीर्षक राखेर युट्युबरले दर्शक र डलर त बटुलेका छन् तर मिडियाको मर्म र कुनै मुद्दाको संवेदनशीलतालाई पनि त्यसैगरी लत्याएका छन् ।
‘प्रचण्डले रिस फेर्न रविलाई फसाएको खुलासा, चितवनको एसपी प्रचण्डको भुपू बडीगार्ड, सबै योजनाको पर्दाफास’ जस्तो हेडलाइन लेखेर समाचार बिकाउने होड युट्युबमा व्यापक छ । यस्ता खबर र भिडियो सामाग्रीले ठूलो समूहमा आशंका, घृणा र र वितृष्णा फैलाइरहेको छ ।
युट्युबरले यस्तो चर्को हेड्लाइन राख्नुको मुख्य कारण नै डलर हो । विदेशमा बस्ने नेपालीलाई नेपालको समसामयिक घटनाबारे स्वाभाविक रुपमा बढी चासो हुन्छ । यसबारे थाहा पाउन उनीहरु युट्युब र डिजिटल मिडियाको साहारा लिन्छन् । अहिले रविको मुद्दा विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि निकै चासोको विषय बनेको छ । किनकि, रविका धेरै समर्थक विदेशमा बस्ने नेपाली नै हुन् ।
युट्युब च्यानलहरुको तार्गेट पनि विदेशमा बस्ने नेपाली हुन् । किनकि, नेपालमा खोलिएका युट्युब च्यानलले पाउने पैसा नेपालभन्दा बाहिरका देशबाट आउने ‘भ्युज’ का आधारमा बढी हुन्छ ।
त्यसैले अदालतमा विचारधीन मुद्दामै पनि ‘सिरियल इपिसोड’ गर्न पछि पर्दैनन् हाम्रा युट्युबर ।
अहिले रवि लामिछाने पक्राउ प्रकरणमा पनि युट्युबरले यस्तै प्रवृत्ति दोहार्याएका छन् जसरी निर्मला हत्या प्रकरणमा देखाएका थिए । डलर तान्ने होडमा उनीहरु नचाहिँदो र अतियुक्तिपूर्ण हेड्लाइन राखेर मान्छेमा नकारात्मक धारणा पैदा गराउने काम गर्दैछन् । कति घृणा रवितिर कति राज्यतिर अनि कति आक्रोश मृत पुडासैनी र उनका शोकमग्न परिवारतिर ।
चितवनमा अहिले ‘युट्युबरको मेला’ नै लागेको छ । सबै त यस्ता नहोलान् । तर, अधिकांशको उद्देश्य भ्युअर्सलाई सही र विश्वसनीय सूचना दिनेभन्दा पनि मुद्दालाई तोडमोड गरी कसरी आफ्ना सामाग्री बढीभन्दा बढी सेयर गराउन सकिन्छ भन्नेमै केन्द्रित छ ।
युट्युव र फेसबुका केही सामाग्री भाइरल बने । केही भिडियोमा देखाइएको छ एउटा फोटो अनि त्यसलाई जुम गरेर शालिकरामको आँखाको नानीमा कोही मान्छेको आकृति । जबकि, मोबाइलबाट लिइएको सेल्फी भिडियो, त्यो पनि सामाजिक सञ्जालमा अपलोड भइसकेको । त्यही भिडियोलाई जुम गरेर शालिकरामको आँखाको नानीमा कुनै मान्छेको आकृति देखिन्छ भन्ने कुरा प्रविधिमा सामान्य ज्ञान राख्ने मान्छेले नपत्याउने कुरा हो ।
अर्को भिडियो पनि फोटो जोडेरै बनाइएको छ । त्यसमा चाहिँ शालिकरामको मृत शरीरभरी निलडाम र सुम्ला देखाइएको छ । प्रहरीले शालिकरामको शरीरमा निलडाम नभएको बतासकेको छ । त्यो भिडियो पनि काश्मीरतिरका एक पीडितको फोटो जोडेर बनाएको पाइएको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।
व्यापारका लागि मुद्दा र विषयलाई यति जटिल बनाएको पनि देखिएको छ ।
फेक फण्डा १ : ‘फेक न्यूज’ बिक्री गर्ने थलो बन्दै सामाजिक सञ्जाल
हुँदाहुँदा अब ‘न्यायको लागि एउटा टिसर्ट अभियान’ रे ! एउटा सेतो टिसर्टमा रविको फोटो राखेर लेखिएको छ, ‘जनता तिम्रो साथमा छ ।’ टिसर्टको मूल्य तीन सय रुपैयाँ । सुरुमा सामाजिक सञ्जालमा ‘ट्रोल’को रुपमा आएको यो टिसर्ट बजारमा बिक्री नै हुन थालेको छ । चितवनतिर प्रदर्शन गर्न पुगेका रविका कतिपय समर्थकले यस्तो टिसर्ट लगाएको देख्न सकिन्छ ।
त्यसबाहेक ‘रवि लामिछाने बचाउ’, ‘आइएम विथ रवि’ लेखिएका टिसर्ट पनि बजारमा देख्न सकिन्छ ।
रविलाई भएकै के छ र ? एकजना पत्रकारको मृत्यु भएको छ । त्यसमा रवि र उनको टिमको नाम जोडिएको छ । यसबारे प्रहरीले अनुसन्धानमात्रै गरेको हो । तर, व्यापार बढाउनकै लागि कतिपयले यो मुद्दालाई ‘कम्प्लिकेटेड’ बनाइदिएका छन् ।
अहिले युट्युव र फेसबुकमा रविको समर्थनमा भन्दै एकपछि अर्को गीत आइरहेका छन् । उनीहरुको उद्देश्य यही हो भनेर हामीले दाबी गर्न त मिल्दैन । तर, युट्युवमा अपलोड गरिसकेपछि समसामयिक भएकाले त्यसलाई धेरैले हेर्छन् भन्ने अपेक्षा चाहिँ गाउने वा अपलोड गर्नेको हुन्छ नै, यति अनुमान गर्न सकिन्छ । धेरैले हेरेपछि डलर पनि आउने भैगो । ‘पशुपतिको जात्रा, सिद्राको व्यापार !’
हामीले यसअघि धेरै प्रकरणमा भएको ‘व्यापार’ देखिसक्यौं, छवि र शिल्पा, निर्मला बलात्कारपछि हत्या, पथरी प्रकरण, भक्तपुर काण्ड आदि इत्यादि ।
यसरी कुनै मान्छेको पीडामा ‘व्यापार’ गर्ने प्रवृत्तिले सोसल मिडियासँगै अन्य मिडिया र मिडियाकर्मीको साख त गिराउँछ नै । सँगै सामाजिक सद्भाव विथोलेर घृणा, वितृष्णा र आवेग, आक्रोश पैदा गराउँछ । हामी केका लागि कता जाँदैछौं बेलैमा सोचौं ।